बुटवलको ढवाहमा सवारी दुर्घटना ३ जनाको ज्यान गयो । | Yatra Khabar
Home विशेष समाचार बुटवलको ढवाहमा सवारी दुर्घटना ३ जनाको ज्यान गयो ।
बुटवलको ढवाहमा सवारी दुर्घटना ३ जनाको ज्यान गयो ।
on: February 17, 2016 In: विशेष समाचार
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रुपन्देहीको ढवाहमा केहि समय अगाडी भएको सवारी दुर्घटनामा तिनजनाको ज्यान गएको छ । भने ४ जना गम्भिर घाईते भएका छन ।
पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गईरहेको बा. १३ च ३०६३ नं. को स्कारपियो जिपले सडकमा रोकिराखेको लु. १ ख ४१९५ बसलाई पछाडीबाट ठक्कर दिंदा तिन जनाको ज्यान गएको पश्चिम क्षेत्रिय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब निरिक्ष्ँक ज्ञानु पाण्डेले बताए ।
रुपन्देहीको खैरेनीबाट जन्ति बोकेर बर्दियातर्फ जांदै गरेको बस बुटवल १४ ढवाह पुल नजिकै यात्रुलाई शौच गर्न रोकिराखेको बखत विवाहबाटै फर्किदै गरेको जिप बसमा ठोक्किएको प्रहरीले बताएको छ । दुर्घटनामा जिपमा सवार एक महिला, एक पुरुष र बसमा सवार एक बालिकाको ज्यान गएको बताईएको छ ।
राती ९ः१० बजे भएको उक्त दुर्घटनाका मृतकहरुको पहिचान हुन सकेको छैन भने उक्त दुर्घटनामा ४ जना यात्रु गम्भिर घाईते भएको र अनय २० जना यात्रु सामान्य घाईते भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाईते हरुको ब लुम्विनी अञ्चल अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ । जिपको ठक्करबाट बस सडकदेखि १० फिट तल रुखमा अड्किएको छ ।